SayHi အခမဲ့များအတွက် Translate | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပညာရေး Apps ကပ » SayHi Translate
SayHi APK ကို Translate
ချက်ချင်း Android ပေါ်မှာ Translate SayHi အတူအခမဲ့အဘို့, အခြားဘာသာစကားမပြောတတ်! ဘာသာစကားနှစ်ခုအတွက်စကားလက်ဆုံရှိသည်နှင့်ကိုယ်တော်၏အသံကိုကျွန်တော်တို့က instantly.Featured App ကိုဘာသာပြန်နားထောင်လော့အား NBC ယနေ့တွင်ပြရန်, Lifehacker, Gizmodo, TUAW, TechCrunch
SayHi အတူ + သင်အောက်ပါဘာသာစကားများနှင့်ထံမှဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ပါတယ် Translate:
အာရဗစ်, ဘော့စျနီးယား, ဘူဂေးရီးယား, ကာတာလ, တရုတ်မျက်မှောက်ရေးရာ, တရုတ်ရိုးရာခရိုအရှေ, ခကျြ, ဒိန်းမတ်, ဒတျချြ, အင်္ဂလိပ်, Estonian အဘိဓါန်, Fijan, ဖိလစျ, ဖင်လန်, ပြင်သစ်, ဂျာမန်, ဂရိ, အီ Creole, ဟီဘရူး, ဟိန္ဒူ, Hmong Daw, ဟနျဂရေီ, အင်ဒိုနီးရှား, အီတလီ, ဂျပန်, ဆွာဟီလီ, ကိုးရီးယား, အံ, အာနီယံ, အာလာဂါစီ, မလေး, မောလ်, ဘှ, ပါရှနျပိုလနျ, ပျေါတူဂီ, ရိုမေးနီးယား, ရုရှား, ဆားဗီးစလိုဗကျ, စလိုဗေးနီး, Somoan, စပိန်, ဆွီဒင်, တမီး, ထိုင်း, Tongon, တူရကီ, ယူကရိန်း, ဒူ, ဗီယက်နမ်, ဝလေ
Arabic အဘိဓါန်: အယ်လ်ဂျီးရီးယား, ဘာရိန်း, အီဂျစ်, အီရတ်, ဂျော်ဒန်, ကူဝိတ်, လစ်ဗျား, မော်ရိုကို, အိုမန်, ပါလက်စတိုင်း, ကာတာ, ဆော်ဒီအာရေဗျ, တူနီးရှား, ယူအေအီး, ယီမင်
အင်္ဂလိပ်: သြစတြေးလျ, ကနေဒါ, အိန္ဒိယ, နယူးဇီလန်, တောင်အာဖရိက, ဗြိတိန်, အမေရိကန်
ပြင်သစ်: ကနေဒါ, ပြင်သစ်
အီတလီ: အီတလီနိုင်ငံ, ဆွစ်ဇာလန်
အဘိဓါန် Mandarin-: တရုတ်, ထိုင်ဝမ်
ပေါ်တူဂီ: ဘရာဇီး, ပေါ်တူဂီ
စပိန်: အာဂျင်တီးနား, ဘိုလီးဗီးယား, ကိုလံဘီယာ, ကော့စတာရီ, ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ, အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ, ဂွာတီမာလာ, ဟွန်ဒူးရပ်စ်, မက္ကဆီကို, နီကာရာဂွာ, ပနားမား, ပါရာဂွေး, ပီရူး, Puerto Rico, စပိန်, ဥရုဂွေး, အမေရိကန်, ဗင်နီဇွဲလား
ကျနော်တို့ SayHi ရိုးရှင်းသော, ခေတ်မီကြည့်အပ်ပေးတော်မူ၏။
setting များကိုနှင့်ပိုပြီးဝင်ရောက်ဖို့ Menu ခလုတ်ကိုထိပုတ်ပါ။
လျင်မြန်စွာ, ဘာသာစကားများကိုပြောင်းလဲအထီးသို့မဟုတ်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအသံ (ဘယ်မှာရှိနိုင်ပါ) ရွေးကောက်သဖြင့်, အရှိန်မြှင့်သို့မဟုတ်မိန့်ခွန်းနှုန်းနှေးကွေး
+ ရိုက် Hold:
+ မိတ္တူ & ရှယ်ယာ:
ကိုအသာပုတ်နှင့်အီးမေးလ်, SMS ကို Facebook က, ဒါမှမဟုတ်တွစ်တာမှတဆင့်အလွယ်တကူသင့်စကားဝိုင်းများ copy သို့မဟုတ်ဝေမျှဖို့တစ်ဘာသာပြန်ချက်အပေါ်ကိုင်ထားပါ။
အန်းဒရွိုက် Talkback ကိုထောက်ခံနှင့် accessiblity များအတွက်အညွှန်းတိုးတက်နေသည်။
+ ပြီးပြည့်စုံသော, သင်သည်ဘာသာစကားအသစ်ကိုလေ့လာသင်ယူနေတဲ့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ခရီးသွားလာ, ဒါမှမဟုတ်သင့်ဘာသာစကားမပြောတတ်ပါဘူးသူကလူတို့နှင့်အတူ chat ချင်လျှင်။
app ကိုသုံးစွဲဖို့မလိုအပ် + အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမိုက်ခရိုဖုန်းခွင့်ပြုချက်စကားသံကိုဘာသာပြန်ချက်များကိုဘို့လိုအပ်သည်, တွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာခွင့်ပြုချက်ကတော့ SayHi အသင်းအနေဖြင့်နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်များခရီးသွားလာခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းနေချိန်မှာသင်ကအသစ်သောဘာသာစကားများရှာဖွေတွေ့ရှိကူညီမှုအတွက်လိုအပ်လျက်ရှိသည်။
အသုံးပြုမှု + သီးသန့်လုံခြုံရေးမူဝါဒနှင့်စည်းမျဉ်းများ: sayhitranslate.com/privacy/index.html
ကျနော်တို့ (စာသားကိုသာ) ဘင်္ဂါလီ, Fijan, ဖိလစျ, လဂက်စီ, Somoan, တမီး, Tongon ဆက်ပြောသည်င့်! ကျနော်တို့ဖောက်သည်ထံမှကြားနာခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲ Translate SayHi တိုးတက်စေရန်လုပ်ဆောင်နေကြပါသည်ကိုချစ်။ support@sayhitranslate.com မှတုံ့ပြန်ချက်ပေးပို့ဖို့အခမဲ့ခံစားရ!
6.49 ကို MB